Inona no Vaovao ao amin'ny iOS 8.3 Beta 1 | Vaovao IPhone
Ny Beta voalohany an'ny iOS 8.3 dia tampoka tamin'ity tolakandro ity ary na dia, araka ny nolazainay taminao tamin'ny vaovao aza, dia fantatra fa efa ela i Apple no niasa ity kinova vaovao ity, miaraka amin'ny iOS 8.2, ny atin'ny iOS 8.3 dia tsy fantatra tanteraka. Izahay tsikelikely mahazo vaovao momba ny vaovao izay entin'ity Beta ity. Ny fampahalalana rehetra etsy ambany.
1 CarPlay tsy misy tariby
2 Kitendry emoji vaovao
3 Fanohanana ny fanamarinana XNUMX-dingana an'ny Google
4 Zava-baovao hafa
CarPlay tsy misy tariby
Rehefa nanangana CarPlay i Apple dia nandiso fanantenana ny maro ny nila nampifandray ny iPhone tamin'ny USB an'ny fiara mba hampiasana azy. Na dia amin'ny dia lavitra aza dia mety ho tombony izany mba tsy hampitsaharana ny baterin'ny fitaovantsika, tsy nilaina izany nandritra ny dia fohy vitsivitsy, ary ny ankamaroany dia ataontsika isan'andro. Toa efa nisaina ny androny io, satria raha manana CarPlay ny fiaranao dia afaka mifandray tsy misy tariby avy amin'ity kinova vaovao ity ianao.
Kitendry emoji vaovao
OS X 10.10.3, Apple's Mac operating system, dia nitondra fanovana ny fitendry emoji, miaraka amin'ny mety fampidirana "sary" vaovao hampidirina ao amin'ny hafatray. Apple koa dia nanova ny keyboard emoji amin'ity beta vaovao ity, na dia toa tsy nampiditra sary masina vaovao aza izy ireo amin'izao fotoana izao.
Fanohanana ny fanamarinana XNUMX-dingana an'ny Google
Fampisehoana vaovao iray hafa izay tonga ihany koa tamin'ny beta farany an'ny OS X 10.3.3 ary hita ankehitriny ao amin'ny beta an'ny iOS 8.3: fanohanana ny fanamarinana dingana roa an'ny kaonty Google.
Fanohanana Apple Pay any Shina amin'ny alàlan'ny Union Pay
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Inona no vaovao ao amin'ny iOS 8.3 Beta 1
Ahoana ny fomba famahana olana ateraky ny jailbreak